Rut ne Naomi | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
Rut ne Naomi
Ɔkɔm kɛse bi sii Israel. Saa bere no, ɔbaa bi a yɛfrɛ no Naomi, ne ne kunu, ne ne mmabarima mmienu tu kɔɔ Moab asase so. Akyiri yi, Naomi kunu wui. Ne mmabarima no waree Moabfo mmaa. Baako de Rut, ɛnna baako nso de Orpa. Awerɛhosɛm ne sɛ, ne mmabarima no nso wui.
Naomi tee sɛ ɔkɔm a asi Israel no aba awiei. Enti ɔyɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛsan akɔ ne kurom. Rut ne Orpa ne no sii kwan so kɔe. Wɔrekɔ no, Naomi ka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Momaa me mma no nyaa aware pa, na me nso mo ne me tenaa yiye. Mepɛ sɛ mo mmienu nyinaa, mosan ware bio. Monsan nkɔ mo kurom Moab.’ Mmaa no kaa sɛ: ‘Yɛdɔ wo! Yɛmpɛ sɛ yebegyaw wo hɔ akɔ.’ Naomi kɔɔ so ara ka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnsan wɔn akyi nkɔ. Awiei koraa no, Orpa san n’akyi kɔe, nanso Rut deɛ wankɔ. Naomi ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Orpa resan akɔ ne nkurɔfo ne n’anyame nkyɛn. Wo ne no nkɔ.’ Nanso Rut kaa sɛ: ‘Merenkɔ nnyaw wo hɔ. Wo man bɛyɛ me man, na wo Nyankopɔn ayɛ me Nyankopɔn.’ Wohwɛ a, asɛm a Rut kae no, ɛmaa Naomi tee nka sɛn?
Rut ne Naomi duu Israel no, na wɔafi ase retwa atoko. Da bi, Rut kɔɔ ɔbarima bi a yɛfrɛ no Boas afuw mu sɛ ɔrekɔsesaw atoko a wɔatwa awie no ase. Ná Boas maame ne Rahab. Boas tee sɛ Rut yɛ Moabni, na ɔne Naomi atena fɛfɛɛfɛ. Ɔka kyerɛɛ nnipa a wɔyɛ adwuma wɔ n’afuw mu no sɛ, ɛyɛ a wonnyaw atoko kakra na sɛ Rut ba a, wabɛsesaw.
Saa anwummere no, Naomi bisaa Rut sɛ: ‘Hena afuw mu na wokɔyɛɛ adwuma nnɛ?’ Ɛnna Rut kaa sɛ: ‘Mekɔɔ ɔbarima bi a yɛfrɛ no Boas afuw mu.’ Enti Naomi ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Boas yɛ me kunu busuani. Kɔ so ara ne mmaa a aka no nyɛ adwuma wɔ n’afuw no mu. Obiara renhaw wo wɔ hɔ.’
Rut yɛɛ adwuma wɔ Boas afuw mu kosii sɛ wotwaa atoko no wiei. Boas huu sɛ Rut pɛ adwuma paa, na ɔyɛ ɔbaa pa. Saa bere no, sɛ ɔbarima bi wu na wanwo mma a, wɔma ne busuani ware ne yere a wawu agyaw no hɔ no. Enti Boas waree Rut. Wɔwoo ba, na wɔtoo ne din Obed. Akyiri yi, Obed bɛyɛɛ Ɔhene Dawid nanabarima. Naomi nnamfo ani gyei. Enti wɔkaa sɛ: ‘Yehowa dii kan de Rut maa wo, na ɔne wo dii no yiye. Afei Rut awo ɔbarima ama wo. Nhyira nka Yehowa.’
“Adamfo bi nso wɔ hɔ a ɔfam ho sen onua.”—Mmebusɛm 18:24
Nsɛmmisa: Dɛn na Rut yɛ de kyerɛɛ sɛ ɔdɔ Naomi? Ɔkwan bɛn so na Yehowa hwɛɛ Rut ne Naomi?
Dɛn nti na na Rut ne Boas aware no ho hia? Abusua ho nsɛm bɛn na yebetumi asua afi Rut ne Naomi hɔ?
Dɛn nti na na Rut pɛ sɛ ogyaw n’abusua ne man hɔ? Su ahorow bɛn na ɔdaa no adi a ɛmaa Yehowa ani begyee ne ho?